Archive du 20170102
Zafy Albert sy Marc Ravalomanana Ao tsara ny fifandraisana
Tonga namangy ny zokiny indrindra amin'ireo filoha teo aloha Zafy Albert tany an-tranony ny 31 desambra 2016 lasa teo ny filoha Teo aloha Ravalomanana Marc
Ankolafy TIM Boriborintany faha-6 Mifanohana amin�ny fijerena ny vahoaka
Mifanohana tanteraka ireo ankolafy TIM isan-tsokajiny eny amin�ny Boriborintany faha-6 amin�ny fijerena ny sosialim-bahoaka eny amin�ity faritra ity.
Lal�m-pifidianana vaovao 3 volana ny famolavolana azy
Tsy ireo mpisehatra Malagasy irery no nandroso soso-kevitra fanitsiana ny lal�m-pifidianana eto Madagasikara.
Depiote Rasoanoromalala Horace Hanohy hatrany ny asa fanasoavana an�Ambohimanarina
Nameno ny fandaharam-potoanan�ny solombavambahoakan�i Madagasikara Rasoanoromalala Horace nandritra ny asaramanitry ny Noely sy faran�ny taona 2016 ny fitsinjovana manokana ireo mpiara-belona monina ao anatin�ny boriboritany faha-6.
Maivana.Izay no azo amintinana ny kabarin�ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny takarivan�ny sabotsy 31 desambra 2016 lasa teo
Kaominina Ampitatafika Taom-pahombiazana ny 2016
Taom-pahombiazana tanteraka ny taona 2016 ho an�ny kaominina Ampitatafika. Raha araka ny fanazavan�ny Ben�ny tan�na Rado Ramparaoelina mantsy dia saika tanteraka tamin�iny taona nivalona iny avokoa ny 50%-n�ny fampanantenana nataony tamin�ny vahoaka nandritra ny propagandiny.
Arahabaina ianao jean mbola nahatratra soamantsara ny 2017 a ! taiza ianareo no nifety izao, teto an-tan�na ihany ve sa naka rivo-dranomasina kely any amin�ilay hotelinao raitra dia raitra.
Taona 2017 Ho avy masiaka ireo mpiaro faritra arovana
Mirongatra be ny fahapotehan�ny tontolo iainana eto Madagasikara.
Vokatry ny orinasa TIKO AAA Manomboka mitobaka ao Antsirabe
Raha Antananarivo no nitobahan�ny entana novokarin�ny Orinasa AAA Tiko teo am-bolohany dia efa manomboka azo jifaina sy mitobaka any Antsirabe ihany koa izany izao, indrindra fa nialoha ny fetin�ny faran�ny taona iny.
Orinasa Fanalamanga Tsy lasan�ny Sinoa izany
Nandeha be ny feo tato ho ato fa lasan�ny Sinoa tanteraka ny orinasa Fanalamanga ao Antsirinala Moramanga. Nitondra fanazavana mifandraika amin�izany ny tale jeneraliny Rakotonirina Augustin ka nambarany tamin�izany fa mpiara-miasa amin�ny orinasa tantanany fotsiny ireo Sinoa ireo fa tsy tompon�ny fanalamanga akory.
Jiro sy rano tapa-dava Porofo ny fanjakazakan�ny vahiny ,hoy James Ratsima
Mbola nisy ihany ny delestazy tamin�ity herinandro nivalona iny na dia tafiditra tao anatin�ny fety aza. Ora iray isaky ny faritra iray no niainana izany raha kely indrindra ankoatra ny afaka omaly faran�ny taona sy omaly Alahady taom-baovao.
Fanontana Alimanaka Nihena hatrany amin�ny 59%
Manodidina ny 500 ariary hatramin�ny 2 alina ariary ny fanontana ny alimanaka iray amin�izao fotoana izao. Samy mampanao azy io avokoa moa na olon-tsotra, na fianakaviana fa indrindra indrindra ny orinasa
FJKM Ambodihady vaovao Nifarana ny fankalazana ny Noely
Tapitra ny zoma teo, tamin�ny fiseharan�ireo kilonga madinika tao am-piangonana , ny fankalazana ny Noely tao amin�ny fiangonana FJKM Ambodihady Vaovao
Ho avy ny fanovana
Resaka fanovana mpikambana ao anatin�ny governemanta indray izao no vaovao mahoraka amin�izao taona vaovao izao, re fa efa eo am-panomanana tanteraka ny fifidianana izay mety ho tanterahana amin�ny 2019 fa tsy 2018 ny HVM ka mitady izay tena ekipa